I-Villa Trupial - I-Airbnb
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Dave & Maggie
I-Villa Trupial iyikhaya lomndeni ngaphansi kwelanga laseCaribbeaan, eCuraçao - isiqhingi sasehlobo elingapheli - endaweni yangasese eduze nolwandle oluhle lwe-Playa Cas Abao.
Indawo yokuphumula yepulani evulekile kanye nekhishi kuphumela kuvulandi nendawo yokudlela evulekile, kubheke phezu kwedamu lokubhukuda, nangale lapho ubuka khona ulwandle. Futhi, eduze kwechibi, uzothola indawo yokudlela yangaphandle kanye ne-BBQ yokuzijabulisa. Amakamelo okulala amane azungeze igceke elimaphakathi, ngalinye liyimfihlo ne-ensuite.
Igceke lixhumene negumbi lokuphumula/ikhishi, elinezicabha zeshutha ezivulekile eziphumela kuvulandi obanzi onezihlalo zokuphumula kanye netafula lokudlela elikhulu lapho izivakashi zingajabulela khona ukubuka, futhi ukusuka lapho zizipholele echibini. Ingxenye enkulu yeveranda nephuli akunakwa, ngakho kuyindawo yangasese lapho ungakhululeka khona. Wonke amagumbi okulala anamashubhu anomsindo avumela umoya opholile ukuthi udlule, anabalandeli nama-aircon ngobusuku obushisa kakhulu.
I-Cas Abao iyindawo yangasese. Inobhishi oluncane olusebenzisa ithrekhi enamatshe, kodwa eduzane kukhona ulwandle oluhle lwe-Playa Cas Abao olunesitolo sebha kanye ne-dive.
Ibungazwe ngu-Dave & Maggie
QAPHELA: ukufika/ukusuka akunakwenzeka ngomhlaka-25, 26 & 31st Disemba kanye no-1st January - kodwa ukubhukha ngalezi zinsuku kulungile.
Abaphathi bezakhiwo nguMaria noRob. Thintana nabo ukuze uhlele ukufika kwakho, futhi bangakweluleka mayelana nezokuthutha nokuqasha imoto. Nakuba kuzoba nezinto ezimbalwa ezibalulekile ezihlinzekwa kule villa - okuhlanganisa iziphuzo nokudla - u-Maria no-Rob bangakunikeza izikhombisi-ndlela ze-ATM nesitolo esikhulu. Bazotholakala ukuze bakushayele kukho konke ukuhlala kwakho ukuze bakusize nganoma ibuphi ubunzima.
Abaphathi bezakhiwo nguMaria noRob. Th…